On 'Badbaadada', golaha qabaa'ilka soo noolaadaan - dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE » Sur 'Survivor', le conseil tribal s'anime – people
TV-ga Arbacada ayaa muujinaya 10 April
Cayaaraha Stanley Cup Playoffs, Golden Knights at Sharks (19h30, NBCSN): Xidigga Koobka Koobka Adduunka wuxuu bilaabmayaa caawa iyo kooxda NBC Sports Group oo ka bilaabeysa shan kulan oo wareeg ah oo ay ku jiraan San Jose. Rabshadaha ayaa ka aargoosi doona maxaa yeelay kooxda Las Vegas ayaa cirib tirtay ciyaartii xilli ciyaareedkii hore. Alex Faust iyo Mike Johnson waxay ku baaqayaan ficil.
"Boqortooyada" (20 h, Fox): Ka dib markii uu wareysi la yeeshay caafimaadka André, qoyska Lyon waxay sameynayaan wax kasta oo awoodooda ah si ay u taageeraan isaga oo socda socdaalkiisa. Inkastoo cookie-ka iyo Lucious ay ku dhaleeceen qaladkooda, Kai (xiddiga martida ah Toby Onwumere) ayaa ku raaxeysanaya Jamal inta lagu jiro habkan. Dhanka kale, Maya waxay aqbashaa meesha ay ka taagan tahay Blake iyo kuwa kale, iyo inta kale ee Boqortooyada waa inay hubiyaan in safarka uu sii socdo.
"Badbaadiye" (20h, CBS): In "Y'all Me Me Crazy", golaha qabaa'ilka ayaa soo dhaweynaya iyo dalladaha ayaa horumarinaya xeelado ilaa dhawr daqiiqadood ka hor codeynta. Intaa waxaa dheer, feejignaanku waa fure u ah caqabadda caadiga ah ee difaacidda.
"Jane Virgin" (21h, CW): Jane waa in ay ka gudubto caqabadii ugu dambeysey ee nolosheeda, taas oo aad uga adag Rafael iyo nafteeda. rajeyn lahaa. Rogelio wuxuu ogaaday in isaga iyo wabiga (xiddiga martida Brooke Shields) aanu isleegayn sida uu u maleeyay. Dhanka kale, Jane iyo Petra waa inay la tacaalaan carruurta aan la socon, taas oo keenaysa su'aalo ku saabsan dareenka Petra iyo Jane midba midka kale.
"Schitt's Creek" (22h Pop TV): In "Life Is Cabaret", kama dambaysta ah xilliga bandhigga, waa habeenkii furitaanka "Cabaret", Stevie lama heli karo. David wuxuu isku dayaa inuu sameeyo farriin muhiim ah, laakiin muusikadiisa ayaa sii wadi doonta inay ruxayso.
"Mummiyo aan xiranayn" (10 h, discovery): Wixii qarniyo, Egypt furato iyo Cabsi galisaan xataa wargeliyay. Waxay kaliya ma ahan fure u furo our ee la soo dhaafay ee qadiimiga ah, laakiin sidoo kale si ay u xalliyaan qarsoon in ay sharaf jabi taariikhyahanadu boqolaal, xitaa kumanaan sano. In this taxane cusub, ciidankii iyo caanka Egyptologist Ramy romani qibradiisa hanuuniyo daawadayaasha adduunka oo dhan halka baarayaan goobaha hilmaami Karin qarsoon aaska, xabaalo wadareedyo iyo xabaalaha ugu xiiso on Earth.
] Baseball, A ee Orioles (16h, NBCSCA)
NBA Basketball, Warriors Against Grizzlies (17h, NBCSBA)
"Mugdiga" (20h, CW)
"Chicago Med" (saacadaha 20, NBC)
"Goldbergs" (saacadaha 20, ABC)
"Beenaalayaal yaryar: macalimiin" (saacadaha 20, Freeform)
"Dabeecadda" (saacadaha 20, PBS)  "Moonshiners" (20h, Discovery)
"Dugsiga" (20h30, ABC)
"Chicago Fire" (21h, NBC)  "Qoyska Casriga" (saacadaha 21, ABC)
"Million Dollar Mile" (saacadaha 21, CBS)
"Hooyooyinka dhabta ah ee New York" (saacadaha 21, Bravo)
"Walaalaha walaalahaa" (21h, HGTV)
Ciyaaraha Garoonka Guy "(21h00, Shabakadda Cuntada)
"Kooxda SEAL" (22h00, CBS)
"Waxa aan ku sameyno hooska" (22h, FX)
"Waxaa faraxsan! "(22h, Syfy)
"Horey u buuxi Samantha Bee" (22h30, SCT)